खाद्य उद्योगमा अल्ट्रासाउन्ड - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
खाद्य प्रसंस्करणका लागि उच्च प्रदर्शन Ultrasonicators
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू उच्च प्रदर्शनको अल्ट्रासोनिटेटरहरू हुन्, जुन ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य हुन्छ र यसैले पुन: उत्पादन योग्य परिणामहरू र निरन्तर उत्पादको गुणस्तरको लागि अनुमति दिन्छ। धेरै उच्च आयामहरू वितरित गर्न सक्षम हुँदै, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू धेरै माग अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै २ 24// अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्कमा र माग गरिएको वातावरणमा २ duty/7 अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ।
ग्राहकहरू हिल्सचर अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरूको उत्कृष्ट मजबूती र विश्वसनीयताबाट सन्तुष्ट छन्। हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू भरपर्दो गरी भारी शुल्क अनुप्रयोगको क्षेत्रमा चल्दछन्, वातावरण र २//7 अपरेशनको माग गर्दछन् र कुशल र किफायती प्रशोधन सुनिश्चित गर्छन्। अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया तीव्रता प्रोसेसिंग समय घटाउँछ र राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्दछ, जस्तै उच्च गुणस्तर, उच्च उत्पादन, नवीन उत्पादनहरू।
विशेष सामग्रीको लगातार प्रयोगको माध्यमबाट, जस्तै टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक वा विभिन्न ग्रेडको गिलास, प्रक्रियाको साथ टेक्निकको अनुकूलताको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर अपरेटर अनुकूल र सुविधाजनक मेशिनहरू छन् कम रखरखाव र एक अपेक्षाकृत कम लागतको साथ।
अनुकूलन र औद्योगिक स्थापना प्रशोधन गर्न व्यवहार्यता परीक्षणबाट – Hielscher अल्ट्रासोनिक्स अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरु को लागि तपाईंको साथी हो!
कसरी खाद्य प्रसंस्करण मा अल्ट्रासोनिक्स काम गर्दछ?
अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग एक राम्रो स्थापित प्रविधि हो जुन खाद्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्दछ जस्तै मिश्रण र होमोजीनाइजेसन, इमल्सिफिकेशन, निकासी, विघटन, डिगासि as & डिएएरेसन, मीट टेन्डरिसेसन, क्रिस्टलीकरणका साथै कार्यमाकरण र मध्यवर्ती र अन्तिम खाद्य उत्पादहरूको परिमार्जन। दशकौं देखि खाद्य उत्पादन प्लान्टमा स्थापित हुँदैछ, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसर परिष्कृत र उद्योग आवश्यकताहरू पूरा गर्न विकसित गरीन्छ। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूले शक्ति अल्ट्रासाउंड तरंगहरू द्वारा बनाईएको शारीरिक शक्तिहरू लागू गर्दछ, जसले परिणामस्वरूप cavitation को उत्पादन।
ध्वनी काभेटेशन भनेको के हो?
ध्वनिक काभेटेशन, जसलाई अल्ट्रासोनिक काभेटेशन पनि भनिन्छ, तरल पदार्थ वा स्लरीहरूमा उत्पन्न हुने अल्ट्रासोनिक क्षेत्रको मिनेट भ्याकुम बुलबुलेको वृद्धि र पतन हो। Cavitation बुलबुले वैकल्पिक उच्च-दबाव / कम-चक्र चक्रको दौरान बढ्छ, जुन क्रमशः सression्कुचन र दुर्लभ चरणहरू हुन्। धेरै वैकल्पिक दबाव चक्रहरु मा हुर्के पछि, भ्याकुम बबल एक बिन्दु मा पुग्छ जहाँ यो अधिक ऊर्जा लिन सक्दैन ताकि बुलबुले एक उच्च-चक्र चक्रको दौरान हिंस्रक रूप बाट उत्प्रेरित गर्दछ। बबल पतनको क्रममा, स्थानीय रूपमा चरम अवस्था देखा पर्दछ चरम तापक्रम धेरै उच्च ताप र चिसो दरको साथ K००K सम्म, २००० एटीएमसम्म दबाव र समान दबाव दबाव भिन्नताहरू, र २m० मी / s वेगको साथ तरल जेट्स सहित। यी cavitational मा “हट स्पॉट”, स्थानीय रूपमा चरम शक्तिहरूले शारीरिक अवस्था सिर्जना गर्दछ, जसले मिक्स गर्ने, निकाल्ने र बृहत स्थानान्तरणको परिणाम दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक फूड प्रसंस्करण ध्वनिक cavitation र यसको हाइड्रोडायनामिक कतर बलहरूमा आधारित छ
अल्ट्रासोनिक इनलाइन प्रसोधन
अल्ट्रासोनिकेटर UP400St साथ बोटानिकलहरूको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन